Pablo iyo Virginia, waxaa qoray Marcel Mithois. Dulmar kooban | Suugaanta Hadda
Pablo iyo Virginia, waxaa qoray Marcel Mithois. Xiriir kooban
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 24/09/2021 12:00 | Buugaag, Novela, Sheekooyinka
Waxaa jira buugaag aad si joogto ah ugu soo noqoto oo aan sidan sameeyo mar kasta oo aan guriga imaado, Pablo iyo Virginia, ee Marcel Mithois. Waa mid ka mid ah buugaagtaas, hadda, da'da ama xiriir gaar ah, oo weli ku daabacan daabacaadda xusuusta muhiimka ah ee suugaanta waana inaad mar walba dib u akhridaa. Si aad u sii wadato isku -ururinta aragtidaas iyo inaad ku raaxaysato, taas oo iyana muhiim ah. Maanta isagaan ka hadlayaa.
2 Pablo, Virginia iyo aniga
3 Guurka paris
Wariye, qoraa, riwaayad iyo qoraa shaashad Faransiis, wuxuu dhashay 15 -kii Juun, 1922 -kii Port Saïd (Masar) wuxuuna ku dhintay Paris sannadkii 2012. Qoraa dhowr shaqooyin oo guul leh Jacqueline Maillan sidii Croque-monsieur y Qoraxdu, wuxuu sidoo kale ahaa qoraa shaashadda taxanaha telefishanka Les Quatre Cents Afgembigii Virginia, oo laga soo dheegtay tiirkiisa toddobaadlaha ah Maalmaha Faransiiska.
Isla mar ahaantaana waxay isagii siiyeen a tiir kaftan ah maxay ahayd Pablo iyo Virginia, iyo waxa lahaa guul badan. Wuxuu qoray in ka badan laba boqol muddo afar sano ah oo aan kala go ’lahayn sidoo kale wuxuu daabacay buugga isaga oo laga soo xulay qaar ka mid ah. Waxay xitaa sameeyeen a Taxanaha TV-ga kaas oo sidoo kale halkan lagu habeeyay oo laga arki karo finalka Super Cup sanadkii 1968 Carlos Mendy sida Pablo iyo Conchita Montes sida Virginia.
Pablo, Virginia iyo aniga
Sheekooyinka Pablo iyo Virginia, guurka reer Paris ee aan carruurta lahayn, waa a taariikhdii waayihiisii ​​- lixdankii - mid bulsho iyo mid caadifadeedba, oo lagu muujiyey waxyaabihii uu soo maray iyo khaladaadkiisa. Anaga Pablo wuxuu ugu sheegaa qofka ugu horreeya dhammaantoodna waxay tixraac u yihiin ama jilayaan Virginia, haweeney leh dabeecad aad u gaar ah, kacsan oo mararka qaar miyir beeshay laakiin mar walba qosol leh.
Waxaan u imid markii aan ogaaday iyaga oo maalin maalmaha ka mid ah siddeetameeyadii qaangaarka ku jira qol ka mid ah habaryartayda waddanka. Jaldiga ayaa igu kalifay inaan mar qura buugga soo qaado oo aan fiiriyo. Markaas ayaan ogaaday inay tahay hadiyad hooyaday u siisay aabbahay, kuwaas oo lagu qoray Círculo de Lectores. Arrintu waxay ahayd 1964. Aniguna gurigii baan geeyay.
Way igu adkaatay inaan akhriyo oo way ahayd mid ka mid ah saamayntii iigu horreysay ee dhadhankayga gaarka ah ee akhriska iyo wax -qorista codka sheekada lab.
Indhaha maanta Pablo iyo Virginia Ma joojinayo ahaanshaha akhrintu waa mid caqli -gal ah maadaama ay ka maqan tahay is -yeelyeel ka badan intii lagu maaweelin lahaa kaftan ku saleysan jilayaasha gebi ahaanba ka soo horjeedda iyo xaalado badan oo mugdi ku jira ama aan caadi ahayn oo ay ku lug leeyihiin.
La degganaansho, cabbir iyo faham dhigayaa Pablo, shaqaale xafiis fudud oo aamusan, guursaday Virginia, xaas guri, aadna u jecel iyada. Wuxuu inoo sheegayaa, xaako badan laakiin sidoo kale kalgacal, damqasho iyo kaftan, dhacdooyin iyada jilaaya, taas oo ka soo horjeeda, go'aan leh, deg -deg ah iyo mararka qaarkood miyir beelid, laakiin had iyo jeer go'aansaday si aad wax u qabsato ama aad wax u samaysato. Furaha labada u dhaxaysa waa is -hoosaysiin wixii daciifnimo ama cillado ah.
Marka, 25 dhacdooyin la doortay kuwaas oo ku jira buugga oo loogu sheegay cutubyo gaagaaban oo u dhexeeya kala -guuritaankiisa illaa iyo baro wadista ama dabaasha -Labada ugu qosolka badan- ilaa abaabulo xaflado loogu talagalay carruurta saaxiibbada ama masiibooyinka ciyaaraha kaarka, ka samaysan daryeele leh carruur aan macquul ahayn ama daryeela eyga weyn (oo aan ahayn) saaxiib kale. Laakiin wuxuu sidoo kale ku adkeysanayaa Baro qoob ka ciyaarka qoob ka ciyaarka caadiga ah ama qalloocinta, buug qor oo golf dheel, oo soo tebisa xaalado taxane ah oo ka yaab iyo madadaalo badan Virginia waxay isku daydaa inay ku xalliso sida ugu fiican ama ugu habboon iyada.
Waxaa sidoo kale jira cutubyada qaarkood oo la dejiyay safarka fasaxa ama saaxiibbada, sida laba safar oo baddeed oo ay ka buuxaan lama -filaan iyo is -maandhaaf, u baxaya duurka oo ay la socdaan lammaane kale oo isku dhow ama a ugaadhsiga shimbir qosol leh mid kale oo ka mid ah kuwa Virginia waxay isku dayaan inay ka dhex muuqdaan bulshada.
Una ka badan akhris fudud iyo saaxiibtinimo taas waxaa lagu gaari karaa oo kaliya laga yaabee gudaha dukaamada buugaagta oo leh dhaqan ama gacanta labaad iyo saddexaad ee caalamka suugaanta ee internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Pablo iyo Virginia, waxaa qoray Marcel Mithois. Xiriir kooban
Veronica Roth: buugaag
Nieves Muñoz. Wareysi lala yeeshay qoraaga Dagaalada Aamusan